सन्दर्भ ः इच्छुक स्मृति तथा सांस्कृतिक बलिदान दिवस – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ १३
समग्र मानवताको हितार्थ जागेको क्रान्तिकारीले आफ्नो निजी जीवनमा हुने प्राप्तिलाई मात्रै गणना गरेर बस्तैन । ‘आफू मरेपछि डुमै राजा’ भन्दै हिड्दैन । म मरे पनि मानव जाति बाँचोस, मानवता बाँचोस भन्छ । ‘मरेपछि डुमै राजा’ का दुई अर्थ लाग्छन—एक ‘म मरेपछि जेसुकै होस’ भन्ने । दुई, डुम जातिलाई होच्याउने । यी दुवै कुरा गलत छन । आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको बेलैसरि भन्दै हिड्ने प्रवृत्ति पनि नितान्त गलत छ । मितको वास्तविक अर्थ दुःखमा सहयोग गर्ने साथी हो । वर्गमित्र हो । आफू मरेपनि यस्ता मित्रहरू बाँचिरहनु पर्छ ।
कृष्ण सेन इच्छुकले आफ्ना कविता, लेख तथा अन्तरर्वाताहरूमा त्यस्ता क्रान्तिकारी पात्रहरूको बिम्ब निर्माण गर्नु भएको छ जो जतिसुकै कठोर क्षणमा पनि विचलित हुँदैन । आफ्नो उद्देश्यमा दृढतापूर्वक डटिरहन्छ । बरु मर्न तयार हुन्छ, क्रान्तिलाई धोखा दिँदैन । वचन र कर्ममा अभेद्य एकत्व भएका कृष्ण सेनको चरित्र उहाँ स्वयंले परिकल्पना गर्नु भएको त्यही आदर्श योद्धाको जस्तै छ । उहाँले लेख्नुभएको प्रिय कमरेड शीर्षकको एउटा कवितांश हेरौँ—
कृष्ण सेनको जम्मा ४६ वर्षको जीवनकालमा ९ वर्ष त जेलमै बित्यो । जेलभित्र रहँदा होस वा बाहिर सेनको जीवनको एक क्षण पनि क्रान्तिकारी कर्तव्यले खाली देखिँदैन । बन्दी र चन्द्रागिरि तथा शोकाञ्जली दुई काव्य तथा इतिहासको यस घडीमा कविता सङ्ग्रहका धेरैजसो कविताहरू उहाँले जेलमै लेख्नु भएको हो । जेल बाहिर रहँदा उहाँका दिनहरू अध्ययनमय, सिर्जनामय र सङघर्षमय भएर बितेका छन । जनताका माझमा गएर बितेका छन । जनादेश र जनदिशाजस्ता समाचार पत्रिका र कलम साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादनमा बितेका छन ।
पल पलमा पैसा र पदको हिसाब गर्दै अतृप्त आत्मा बोकेर विक्षिप्तझैँ भौतारिँदै हिँडेका कम्युनिष्ट नामधारी पात्रहरू यत्रतत्र भेटिन्छन आज । तिनले बेलामौकामा कृष्ण सेनको नाम पनि लिन्छन । तर कृष्ण सेन नितान्त विपरीत देखिनुहुन्छ । अभाव र दुःख कष्टका हण्डरै हण्डरमा उहाँको जीवन बित्छ । तर उहाँमा कुनै गुनासो भेटिदैन । विचार, सिर्जना, संगठन र आन्दोलनका सङ्घर्षमय दिनचर्यामै तृप्त हुनुहुन्छ । उहाँमा कहाँबाट आयो यो तृप्ति र यिनमा किन आएन ? किन सामान्य पीडामा पनि बढ्ता कहराउँछन यिनी ? किन चरम यातनाले मृत्यको मुखमा परिसक्दा पनि कहराउनु हुन्न कृष्ण सेन ? कृष्ण सेनको चिन्तनको समग्र धारा क्रान्तितिर डोलिएर बगेको छ । उहाँको सौन्दर्य चेतनाको विकास पनि यसै गरी भएको छ । जनता, क्रान्ति र भविष्य प्रतिको उहाँको विश्वास मृत्यको भयभन्दा निकै बलवान छ । क्रान्तिकारी उद्देश्यमा समर्पित उहाँको जीवनको लय यातनाजन्य पीडाको लयभन्दा निकै गहिराईबाट घनीभूत भएर आएको छ । कृष्ण सेनको क्रान्तिकारिता वर्गसङ्घर्षको मैदानबाट मात्रै होइन, भीषण आत्मसङ्घर्षको भुङ्रोबाट समेत खारिएर निस्केको हुनाले चरम चञ्चलताबाट मुक्त छ । अधैर्य र अत्यासबाट मुक्त छ । साम्यवादको लक्ष्यप्रति दृढ प्रतिज्ञ छ । ढुक्क छ ।
जागीर खाने कि राजनीति गर्ने ? आर्थिक रूपले अभावग्रस्त परिवारको गुजारा चलाउन न्यूनतम आम्दानीको बाटो खोज्नै पथ्र्यो । निकटको सम्भाव्य विकल्प थियो जागीर । नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीमा जागीर पाउनु पनि भयो । संसार बदल्ने स्वप्नदर्शी चेतना हुर्कँदै गरेका इच्छुकलाई चेतनाको आगो सल्काउँदै जनताको माझमा जान मन थियो । जनतालाई चुसेर दीनहीन बनाउने शोषकहरूका विरुद्ध विशाल जनसागर उरालेर वर्गसङ्घर्षको मैदानमा लान मन थियो । जागीर बाध्यता थियो । जागृति अभियानमा संलग्नता स्वैच्छिक थियो । वाध्यता र स्वेच्छा आपसमा टकराउँथे । यो टक्कर उहाँको मनमैदानमा हुन्थ्यो । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । उहाँलाई मनोद्वन्द्वको अवस्थामा पु¥याउने यस्ता अनेकौँ विषयहरू थिए । प्रश्नै प्रश्नका यस्ता सयौँ दोबाटा र चौबाटाहरूमा निर्णय लिनु अघि निर्णयलाई प्रभावित पार्न आफ्ना मनभित्र आएका लोभ र भयसित निर्मम युद्ध लड्नु भएको छ कृष्ण सेन । निष्ठा, निर्र्लोभ र निर्भयतालाई जिताउनु भएको छ । त्यसैकारणले उहाँको क्रान्तिकारिता सम्पुष्ट छ ।
विघटनग्रस्त पूर्र्वी युरोपसम्म
कृष्ण सेनमा मितभाषिता छ । अर्घेलो एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न । मृदुभाषिता छ । वर्गवैरीसित चट्टानभन्दा कठोर इच्छुक वर्गमित्रसित नौनीभन्दा नरम हुनुहुन्छ । स्पष्टवादिता छ । उहाँका मुखबाट मुखेन्जी एउटा कुरो र पिठ्यूँपछाडि अर्र्को कुरा सुन्नु सम्भव छैन । समय सचेतना छ । निर्धारित समयमा ठाउँमा नपुग्ने र अर्काको समयलाई अपमान गर्ने रोगबाट उहाँ मुक्त हुनुहुन्छ । इतिहासबोध छ । मानव सभ्यताको विकासमा श्रम र सङ्घर्षको भूमिकालाई राम्ररी अध्ययन तथा आत्मसात गर्नु भएको छ । कृष्ण सेनको जिम्मा जमानी अचुक छ । निर्णय गर्ने, जिम्मेवारी स्वीकार्ने अनि निर्णय र वचनबद्धतालाई बेवारिश छाडेर बतासिने गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले उहाँलाई चियाउन पनि सक्तैन ।
इच्छुक एउटा ऐना पनि हो जसमा हामीले आफ्नो अनुहार हेर्न सक्छौँ । इच्छुक हाम्रो क्रान्तिकारिता जाँच्ने कसी पनि हो र क्रान्तिकारितालाई उध्याउने ढुङ्गो पनि हो । त्यो ऐनामा आफ्नो अनुहार नहेर्ने, त्यो कसीमा आफूलाई नघोट्ने र त्यो ढुङ्गामा आफूलाई नउध्याउने हो भने क्रान्ति सन्दर्भका तमाम बहसहरू बुद्धिविलासभन्दा बाहिर जाँदैनन ।
कृष्ण सेन आगोको अजम्मरी बीउ हो । एउटा कालखण्डको क्रान्ति असफल हुँदैमा कृष्ण सेनको औचित्य समाप्त हुँदैन । उचित अवसर पाउनासाथ आगो कुनै पनि बेला बडवानल भएर जाग्न सक्छ ।
श्रावण १९, काठ्मान्डौ अपर कर्णाली परियोजना...
१९ साउन, काठमाडौं, सरकारले लगानी बोर्ड नेपालको...